Egwuregwu ime ihe n'oge okpomọkụ - Nke kacha mma ị ga-eburu n'uche | Bezzia
Egwuregwu kachasị mma ịme n'oge okpomọkụ
Susana godoy | 14/06/2022 16:00 | Mmega ahụ
Egwuregwu ị ga-eme n'oge okpomọkụ nwere ike ịdị iche iche. N'ihi na ekele maka mbata nke ihu igwe dị mma, anyị nwere ike ịpụ na-ekpori ndụ ikuku ọhụrụ iji mee ka obere mmegharị ahụ buru. Ọ bụ eziokwu na anyị ga-echefu ụbọchị kachasị mma na oge etiti ụbọchị, na-ezere ihe omume niile nke ụdị a.
Ma ọ bụrụ na n'oge na-adịghị, ezumike ga-abụ protagonists nke ndụ gị, ị nwere ike mgbe niile na-enwe ntakịrị ihe niile. N'otu aka ahụ kwesịrị ekwesị zuru ike, ma na nke ọzọ na-atọ ụtọ n'ụdị ọzụzụ. N'ụzọ dị otú a, ahụ gị ga-anọgide na-arụsi ọrụ ike, na nke kachasị mkpa, ahụike dị ka n'ime afọ ndị ọzọ. Ka anyị bido!
1 Igwu mmiri otu n'ime egwuregwu kacha mma ịme n'oge okpomọkụ
3 The sọfụ
5 paddle sọọfụ
Igwu mmiri otu n'ime egwuregwu kacha mma ịme n'oge okpomọkụ
Ọ bụ eziokwu na enwere ike igwu mmiri n'ime afọ niile. Ịga ọdọ mmiri n'oge oyi bụkwa nhọrọ magburu onwe ya. Ma n'ụzọ ezi uche dị na ya mgbe oge okpomọkụ rutere, ọ dị ka ihe mkpali na-eweghara anyị. Ọ bụ oge ikwe ka anyị buru otu n'ime egwuregwu kachasị mma. Ọ bụ n'ezie otu n'ime nhọrọ kachasị mma yana maka afọ ma ọ bụ ọnọdụ niile. Ọbụna maka ndị nwere nsogbu azụ ma ọ bụ ụmụ nwanyị dị ime. N'ime uru nke igwu mmiri anyị nwere ike ịsị na ọ na-eme ka mgbanwe dịkwuo mma kamakwa ike na ntachi obi. N'otu oge ahụ, anyị na-ahapụ ezigbo calorie.
Ọ bụ ezie na n'oge oyi, anyị nwekwara ike ime ụzọ ahụ jọgburu onwe ya, ọ dịghị ihe ọ bụla dị ka ịme njem mgbe ihu igwe ka mma. Iji mee nke a, anyị ga-ahọrọ ụbọchị na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Ebe ọ bụ na naanị mgbe ahụ ka anyị ga-enwe mmasị na njem na odida obodo nke ukwuu. Ije ije bụ otu n'ime mmemme a na-atụ aro n'agbanyeghị oge anyị nọ na ya. Na mgbakwunye na ịba uru maka ahụ, ọ na-abakwa uru maka uche, ebe ọ ga-eme ka anyị dị jụụ ma belata nrụgide niile.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ egwuregwu kpakpando nke okpomọkụ. N'ihi na ị nwekwara ike iji ohere nke ihu igwe dị mma na osimiri na-anwale ya. N'ezie na nso ebe ị bi ma ọ bụ ebe ị na-anọ n'oge okpomọkụ, a ga-enwe klas nke egwuregwu a. Ma ndị okenye ma ụmụaka ga-enwe klaasị dabara na ọkwa ha, nke nta nke nta, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ adrenaline nke na-ahapụ anyị.. Ị maara na ekele maka ya ị nwekwara ike ime ka ahụ gị dịkwuo mma ma mee ka ahụ gị sie ike. Na-echefughị ​​na ọ bụ ụzọ zuru oke iji belata nchekasị.
Ọ dịghị mfe, ị ga-ekweta. Ma kitesurfing bụkwa ihe ọzọ dị iche iche iji nwee ike ịnọ n'ụgbọ mmiri na n'ezie, na mmiri. Ma na mgbakwunye na kwuru osisi ị ga-eduzi a egbe, otú itule na ntughari bụ isi ihe na-eme egwuregwu dị otú ahụ. Ọ naghịkwa ewute anyị na anyị debanyere aha na nkuzi iji mụta ihe ndị bụ isi, yana aghụghọ kacha mma. Anyị na-emesi gị obi ike na omume dị otú a ga-eme ka ịse adrenaline gị, na-arụ ọrụ dị ukwuu nke ikuku.
N'iji uru nke oké osimiri na ihu igwe dị mma, anyị na-aga n'ihu na-ekwu banyere mbadamba nkume na mmiri. N'okwu a, anyị nwere Paddle surfing, nke bụ nhọrọ ọzọ dị mma n'ụdị egwuregwu kachasị mma iji mee n'oge okpomọkụ a. Ị ga-edobe nguzozi gị na bọọdụ wee nyere onwe gị aka na paddle ka ịga n'ihu. Ee, ọ dị ka ọ dị mfe mana ọ bụghị mgbe niile. Daalụ maka mmega ahụ dị ka nke a. ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ dị iche iche nke anụ ahụ nke ahụ dum. Ọ bụ ezie na ndị isi ga-abụ ejima ma ọ bụ mkpịsị ụkwụ, ma na-echefughị ​​na abdominals ma ọ bụ pectoral na biceps ga-abatakwa n'egwuregwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Egwuregwu kachasị mma ịme n'oge okpomọkụ
Ịkwado ntụkwasị obi dị ka mmegwara megide di na nwunye